Fa maninona ny gadra politika no tsy mety tafavoaka?
2009-03-26 @ 04:25 in Politika
Araka ny iaraha-mahita amin'ny vaovao an-tsary amin'ny jery tsy miankina ohatra dia re fa nampiaka-peo ny gadra politika ny amin'ny mbola tsy namoahana azy ireo fa mbola ipetrapetrahan'izy ireo eny amin'ny resto gasy eny Anjomakely manaraka iny lalampirenena fahafito iny. Eto aloha dia tsara ny manasongadina tranga iray izay mbola tsy voantantara tsara hatramin'izao. Efa niarahan'ny rehetra nandre fa anisan'ireo noafahan'ny hivoaka ny fonjaben'i Tsiafahy ny kolonely isany Kotity sy Balbine. Tena tsy mety io filazana io hoe anisany io fa i Kotity indrindra no notadiavin'ny miaramila voalohany havoaka mialoha ny rehetra fa miandry ny sonia ara-panjakana fotsiny sisa. Tsy manaiky mihitsy ny miaramila hoe afaka ny hafa raha tsy io fanta-daza ho mpamono olona io aloha no afaka voalohany. Mahafantatra tsara anefa na dia ny fitondrana tetezamita aza fa na dia ny mpankasitraka azy aza tsy hanaiky velively izany trangan-javatra izany (nefa maro amin'izy ireo no tsy hanambara azy ampahibemaso aloha). Saingy, manosika mafy dia mafy ny miaramila izay nahazoany ny fitondrana ka eo no manahiran-tsaina indrindra ny ao amin'ny fitondrana tetezamita. Na tiany na tsy tiany dia tratran'ny kendarorok'ireo heriny ihany ny ao amin'ny fitondrana tetezamita.
Io toe-javatra io dia efa mampiharihary sahady fa tsy voafehin'ny mpitondra tetezamita velively ny miaramila, fa ny miaramila no "mibaiko" ireo mpitondra ireo. Fantatry ny mpitantana orinasa tsara io tranga io, hany ka na dia eo aza ny fangatahan'ny mpitondra tetezamita manerana ny orinasam-panjakana sy ny orinasa tsy miankina dia aleon'ireo mpandraharaha kokoa mandoa ny "rakitra" any amin'ny miaramila na dia mba mahazo ny anjarany ihany aza ny tena mpitantana ny tetezamita. Tsy mahagaga raha lasa mirobaroba mihitsy ny ao amin'ny tobin'ny Capsat amin'izao fotoana izao satria ry zareo no mahazo vola kokoa noho ny mpitondra. Tamin'ny voalohany ny miaramila no mitety orinasa maka rakitra fa ankehitriny kosa ny any amin'ny orinasa no mhazakazaka mandoa ny rakitra any amin'ny toby miaramila eny Fiadanana Soanierana indrindra indrindra. Tsy mba misy izany velively anefa any amin'ny toby miaramila hafa. Raha ny fomba fijeriko aloha dia toa izao toe-javatra izao no fanaon'ny mafia sy loharanom-bolany ihany koa. Dia samia mieritreritra isika mianakavy.
Manaraka izany, hita ho mihamitombo isan'andro ny mpanao fihetsiketsehana manohitra ity fitondrana azo tamin-kery ity. Tafiditra anatin'izany avokoa ny sarangan'olona rehetra misy eto Antananarivo na dia somary vitsy an'isa kokoa aza ny avy eny ambany tanàna. Tsy mahagaga raha tsy mahazaka izany ireo mpanohana ny TGV mihevitra fa faritaniny tsy azo kitikitihina ny kianjan'ny 13 mey na dia ataonay ho lalana fandalovana fotsiny aza io toerana io. Manomboka eo anoloan'ny tohatoha-baton'Antaninarenina (tohatohabato Ranavalona voalohany) izany fihantsiana izany, ka nahantonga ireo teo amin'ny voalohan-daharana nihafihafy ka taty ampitan'ny fandehanana tongotra aza no nandeha an-tongotra. Nisy nahita izany ireo olona taty aoriandriana ka tonga dia nofehieziny mihitsy ny arabe iray manontolo, vaky nandositra aloha ny voatavo tsy mifandraka tsy mahalala izay hampididoza ho azy nefa miseho ho mpitolona politika mafana fo sahady. Raikitra indray ny fitorahana tavoahangy plastika feno amany. Niala fotsiny ny mpanao fihetsiketsehana fa tsy mbola namaly, satria zaza amam-behivavy mpanohana ny TGV saingy fantatry ny rehetra amin'ny fiantso hoe "Quatr'amis" ve no ifamaliana?
Fa ny tora-bato ataon'ny mpanohana ny TGV any ambadiky ny arcades amin'izay no somary bebe ka nampitroatra ny tanora hamaly bontana, hita mihitsy fa te-hanjakazaka sy te-hanao ny fanaony ny mpanendaka sy ny mpanao an-keriny fa mody afenina ambadiky ny tolona politika ilay izy. Nahazo teny tsy hamaly moa ny mpanao fihetsiketsehana nefa ataoko fa tsy mety intsony ny mandefitra amin'izao tranga izao. Ireo any amin'ny faraparan'ny laharana hatrany manko no tena mahazo sotasota satria efa lasa manko ny maro amin'iny. Izany no nahatonga ny vehivavy sasany ho voaendaka tamin'ny alatsinainy ohatra (mibaribary fa te-hanendaka no tiana atao voalohany). Ny tena mahasorena manko dia efa misy zandarin'ny FIGN (ireo nioko voalohany tao amin'ny zandarimaria) iray kamiao niantsona hatramin'ny maraina teo amin'ny esplanade Analakely nefa tsy nanao na inona na inona mihitsy nandritra ny sotasota nataon'ny mpanohana ny TGV saingy niditra an-tsehatra amin'izay rehefa vonona ny hamaly bontana ny mpanohitra ny tetezamita. Mibaribary fa mankaloiloy an-dry zareo ny fandalovan'ny mpanao fihetsiketsehana an'Analakely rehefa hody. Hevitro manokana: aleo tsy mandefitra mihitsy manoloana izao sotasota izao satria mitady ny hanaovana an'Analakely ho toeram-panjakazakany ny mpangalatra, mpanendaka, mpandroba zatra ny fanaony tamin'ny fotoana nitolomany vao tsy ela akory izay. Omeo alalana ny tanora mpanao fihetsiketsehana hanafay ireo mitady hanakorontana ireo.
Jentilisa, 26 marsa 2009 amin'ny 06:23